Ogaden News Agency (ONA) – Wadanka Suuriya oo Gargaar Banii’aadminimo La Gaadhsiinayo.
Wadanka Suuriya oo Gargaar Banii’aadminimo La Gaadhsiinayo.
Qaramada Midoobeey (QM) waxay sheegeysaa in diyaaradeheeda ay ballaadhinayaan gaadhsiinta gargaarka ee dadka ku go’doonsan magaalooyiin kala duwan oo wadanka Suuriya katirsan.
QM iyo hay’adaha la shaqeeya ay hawada sare ka daadin doonaan cunto, biyo iyo daawo loogu talagalay in kabadan 150 kun oo qof. Hadalkan QM waxa uu imaanayaa iyadoo weli dalka Suuriya ay ka socdaan dalaallo lagu deminayo colaadda huraysa.
Laakiin dhinacyada ay xabad joojintaasi u dhexeyso ayaa midba midka kale ku eedeynaaya carqaladeynta xabad joojinta. Balse, kooxda mucaaradka ugu wayn ee Suuriya waxay sheegeysaa in xaaladda hadda ay aad uga wanaagsan tahay kahor xabad joojinta. Haseyeeshee, diyaarado dagaal ayaa waxay duqeeyeen dowr jeer waqooyiga dalka Suuriya.
Dadka arrimaha Suuriya u ololeeya waxay aaminsan yihiin in duqayntaasi ay ka dambeeyaan diyaaradaha Ruushka oo taageeraya xoogagga Bishaar Al-Asad. Koox kamid ah mucaaradka qunyar u socodka ah waxay sheegeen in 15 jeer ay dowladda jabisay heshiiska xabad joojinta.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sucuudiga Al-Jubayr, waxa uu sheegay in xaaladda Suuriya markale quwadaha caalamka lagala tashanayo. Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Ingiriiska, Philip Hammond, waxa uu dhankiisa sheegay in guusha xabad joojinta ay ku xidhantahay xukuumadda Moscow.